Azo soloina Shield Film Shield Film Shield China Manufacturer
Description:Toeram-pitaovana taovolo,Sarimihetsika Face Shield,Mask ny fiarovana plastika
Home > Products > Mask Shield > Azo soloina Shield Film Shield Film Shield
Model No.: MAS12
Ny ampinga fiarovana azo tsapain-tanana vita amin'ny Full Face Shield amin'ny Flip-up
Ny saron-tavy fiarovana dia manana faritra arovana lehibe kokoa noho ny mason-tava masony, izay ahafahana misoroka ny foam manidina. Tsy ampy ny famoronana saron-tava. Ny olona mila ampiasaina imbetsaka, ary ny iray kosa mila maka fiara fitateram-bahoaka, lalamby, fiaramanidina mieritreritra ny fahitana ny vahoaka, tsy afaka manampy mikoropaka?
Raha mifanosika na mikohaka imbetsaka ilay olona mifanohitra. Tsy ilaina ny fikoropahana, fa raha tsy mahavita saron-tava, dia miaro hatrany ny fiarovana
Ny antsipirihany fiarovana amin'ny fiarovana Shiita:
face shield Thickness
safety face shield Characteristic1 More protection, more effective, safe and secure.
safety face shield Characteristic2
safety face shield Characteristic3
Fiarovana fiarovana amin'ny endrika miaro:
1. Manova ny "N95" avy amin'ny saron-tava mahazatra amin'ny segondra: amin'izao fotoana izao, miha-maintso ny saron-tava N95, ary ny lanjan'ny sarimbava mahazatra + miaro amin'ny fiarovana dia mitovy amin'ny fiasa N95;
Ny torolàlana fiarovana amin'ny endrika fiarovana fiarovana :
1. Zahao raha simba na simba ny fonon-tanimbary fiarovana amin'ny tarehy, ary diovy ary hosolo ara-potoana ny entana
2. Diniho raha nohidiana haingana ny bokotra fanovana eo amin'ny andaniny roa amin'ny rakotra fiarovana fiarovana amin'ny tarehy
4. ampifanaraho amin'ny zoro fiarovana ny fonon-tava fiarovana ary arovy ny akanjo
Toeram-pitaovana taovolo Sarimihetsika Face Shield Mask ny fiarovana plastika Toeram-piarovana mafy orina Toeram-pitsaboana vonjimaika Toeram-panadiovana fiara Toeram-piompiana Toeram-piarovana ara-tsakafo ara-tontolo iainana